China ONA CS2 fekitori uye vagadziri | Foton
Kugonesesa ruoko uye kutyaira ruzivo kunotungamira kune ramangwana rekuona
Rudzi rwemafuta Diesel / Peturu
Kutyaira Type 4 * 2
Wheel Base 2570/3110
Yakagara nhaka kubva kunhaka uye yakazvipira kune hunyanzvi, VIEW S inoratidza mweya wekunaka mune yega dhizaini yekugadzira. Kutsvaga kukwana munzvimbo, mashandiro, kuchengetedzeka uye kugadzirwa hakumboperi.
ISF2.8-Yakasimba simba musimboti kubva kuCummins; 96KW-Simba rakasimba; Simba rakasimba-Imwe yemasimba epamusoro-per-litre mwenje dhiziri injini munyika; Injini ine torque inoburitsa 280N.M inova 22.5% -60% yakakwira kupfuura iya yezvigadzirwa zvakafanana; Kunonyanyisa torque kuburitsa pa1400 r / min; 8.3L-Mafuta anoshandiswa pa100 km.
ISF 2.8 injini yedhiziri inopa advanced thermal engineering, yemagetsi kusangana, Yakakwira Pressure Yakajairika Rail peturu system uye yakashatiswa turbocharger, inova yakanaka kune yakajeka yekutengesa mota kunyorera.
SIMBA: 107 - 160 hp
Chitupa: EURO 3
In-mutsetse 4-humburumbira, 16-vharafu, SOHC, multiport EFI
Kugamuchira maviri akaenzana shaft, hydraulic tappet, rocker ruoko ine tsono inobereka, yakasanganiswa yakakosha yekutakura chivharo uye kugadzira
Iyo inoratidzira yakakwira simba, compact compact, yakaderera vibration, yakaderera ruzha, yakaderera mafuta kudyiwa, yakaderera emission, nezvimwe.
Mechatronic (inosanganisirwa yekudzivirira kutonga)
ASIS - inochinja nzira yekuchinja
Yakakwira simba-kusvika-kuyerwa reshiyo (yakavakirwa paLepelletier giya seti hunhu)
Mutyairi / pamberi pevapfuuri padivi peyaviri bhegi remhepo
Kudzivirirwa sando kunowedzera chengetedzo chinhu mune emergency
Kumusoro Kutiza Hwindo
Pamusoro pekupukunyuka hwindo kunovimbisa kuchengetedzeka kwako
Moto Wekudzima Moto
Royal Saloon Royal Saloon ndiyo vhezheni yemhuri uye bhizinesi. Iine yemukati yemukati, yakakura nzvimbo uye yakavimbika kunyorera nyaradzo uye chengetedzo, inogona kutora hanya kune wese munhu anopfuura makuru.
Mutsigiri Mutsigiri vhezheni inogutsa zvido zvevatakurwi kuendesa. Iine akawanda marongedzo ezvigaro, anokwanisa 14-17 vafambi anowanikwa.
Transor Transor vhezheni inogadzirirwa yekutakura zvinhu. Iyo yepamusoro yekutakura inokwana inogona kusvika 2000 litita.